गुल्मीमा महिला उमेदवारको खडेरी छैन : यी हुन उमेदवारका आकंक्षी महिलाहरु ! – ebaglung.com
गुल्मीमा महिला उमेदवारको खडेरी छैन : यी हुन उमेदवारका आकंक्षी महिलाहरु !
२०७३ चैत्र २४, बिहीबार २१:२७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७३ चैत २४ । स्थानिय तहको निर्वाचनमा गुल्मीमा महिला उमेदवारीको खडेरी भन्ने समाचार आई रहँदा विभिन्न वडा , गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा विभिन्न राजनैतिक दलबाट एकसेएक महिला उमेदवारका आकंक्षीहरु देखा परेका छन् ।
, धुर्कोट गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मिना जिसी , जानकी भण्डारी लगायतका महिलाहरु गाउँ प्रमुख सम्मको हैसियतमा छन् । सोही गाउँपालिकामा एमालेको तर्फबाट वसुन्धारा भण्डारी र कमला विश्वकर्मामा गाउँ प्रमुख सम्मको दावेदारी गर्न सक्ने नेतृहरु हुन् ।
बिप्लव माओबादीले स्थानिय तहको निर्वाचन बिथोल्न प्रतिरोध कार्यक्रम गर्ने !